Nin hubeysan ayaa xasuuq ba’an u geystey caruur School joogtey oo da’dooda u dhexeyso 5 ilaa 10 jir – idalenews.com
Sida ay ku warameen inta badan Televisions dalka Maraykanku ugu yaraan 28 qof u badan caruur da’doodu u dhaxeyso 5 ilaa 10 sano jiro ayaa ku geeriyooday, rasaas uu nin qori ku hubaysani ooda kaga qaaday dugsi hoose oo ku yaala Gobalka Connecticut, oo qiyaastii 100km u jira Gobalka New York.
Waxaana sida wararku sheegayaan 22 ka mid ah dadkaas dhintay ahaayeen arday caruur ah oo dugsi hoose ka dhiganayay degaankaas, dhinaca waqooyi bari ee dalka Maraykanka ku yaala.
Sida ay iyaduna warisay shabakada wararka ee CNN- dadkan dhintay oo tiradoodu kor u dhaaftay labaatan ayaa kala badh ka mid ah ay ahaayeen carruur wax ka baranaysay, dugsi ku yaala degaankaas, waxaanay ardaydaasi subaxnimadii hore ee jimcihii maanta toogashadani ku dul dhacday iyaga oo safka ku jira, dugsigooda oo lagu magacaabo, [Sandy Hook] halakaas oo ah tuulo yar oo 128km, u jirta magaalada New York.
Madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama ayaa ka hadlay falkan ka dhacay degaanka, Connecticut, oo sida warbaahintu sheegtay uu isagu gaadhsiiyay warkeeda, waxaanu ku tilmaamay wax laga xumaado.
Madaxweyne Obama waxa uu tacsi u diray qoysaskii carruurtoodu kaga dhimatay dhacdadaas, waxaanu ka waramay sida uu uga xumaaday ee dhacdadaasi u taabatay qalbigiisa, madaxweynaha Maraykanka ayaa shacbiga dalkiisa u jeediyay hadal xamaasad iyo qiiro badani ka muuqatay oo uu dareen murugo oo badani ka muuqday.
Xasuuqan uu gaystay qofka aan la garanayn ujeedada ka danbaysay ayaa dadka Maraykanka soo xasuusinaya, dilal is xig xigay oo dad cadhooday, ama isku buuqay ay ku galaaftaan nolosha dad tiro badan sanad kastana ka dhacda dalka Maraykanka.
Dalka Maraykanka oo hubku yahay mid sharci ah oo dadku haysan karaan, waxa sanadihii u danbeeyay ka taagnaa doodo la xidhiidha sida laga yeelayo, hubka tirada badan ee shacabku haystaan oo sanad kasta gaysta dhimasho tiro badan, taas oo ka dhalatay markii wakhtiyadii u danbeeyay ay bateen dilka loo gaysto ardayda dugsiyada dhigata.
Dadwaynaha ku dhaqan degaankaas gaar ahaan waalidiinta ayaa goobta uu dugsigani ku yaalo yimi iyaga oo aad u murugaysan oo mid walba raadinayo, carruurtiisi, waxa kale oo jiray kuwo ubaxyo baroor diiq ah dhigayay, waxaanay gabi ahaanba tuuladaasi isku badashay meel murugo oo xaalad deg deg ah lagu soo rogay
Daawo: Fantasiyihii guurkii dhacey 12:12:12 oo Gabar Soomaaliyeed oo guursatey nin Swedish ah ay ka qeyb aheyd